Faransiiska oo Jarmalka ku quusiyay 2-0 - BBC News Somali
Faransiiska oo Jarmalka ku quusiyay 2-0
Image caption Ciyaaryahan Antoine Griezmann, oo dhaliyay labada gool ee ciyaarta
Laba gool ee ciyaarta ayaa waxaa Faransiiska u dhaliyay ciyaaryahan Antoine Griezmann, kaasi oo haatan 6 gool ku hogaaminaya gool dhalinta tartankaasi.
Ciyaaryahankan ayaa labada qeybood ee ciyaarta kala dhaliyay labadiisa gool, iyadoo goolka hore uu dhaliyay daqiiqaddii ugu dambaysay qeybtii hore ee ciyaarta, kaddib markii kabtanka xulka Jarmalka Bastian Schweinsteiger uu gacan ku taabtay kubadda sidaana gool ku laad loogu dhigay, si fududna uu u daba mariyay goolhaye Manuel Neuer.
Xulka Jarmalka ayaa ciyaarta iyo kubad isku dhiibka ku sareeyay tan iyo bilowgii ciyaarta balse Griezmann 18 daqiiqo markii ay ciyaarta ka harsan tahay waxa uu dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta.
Sidaana waxa uu xulka Faransiiska ugu gudbay kama dambeysta koobka Qaramada Yurub, iyadoo Axadda ay wada dheeli doonaan xulka Portugal.
Xogta ay tahay inaad ogaato
Faransiiska ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee laba jeer martigaliya tartanka Qaramada Yurub misana labadaa jeerba gaara kama dambeysta koobkaasi (waana 1984 iyo sanadkan 2016).
Faransiiska ayaa markii ugu horreysay tan iyo 1958 Jarmalka kaga adkaaday tartan weyn.
Michel Platini oo kaliya (oo dhaliyay 9 gool tartankii Euro 1984) ayaa dhaliyay goolashii ugu badnaa ee uu ciyaaryahan dhaliyo tartanka Euro, Antoine Griezmann-se waxa uu haatan leeyahay 6 gool.